ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေအတွက် ရိုးရှင်းသော မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်း အချက်အလက် (၅) မျိုး
သင့်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်သမီးလေးက မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား? ပထမဆုံးအကြိမ် မိတ်ကပ်မလိမ်းမဖြစ်လိမ်းရမယ့် အရေးကြီးပွဲကြီးကြီးတစ်ခုခုကို တက်ရတော့မှာလား? ဒီနေ့ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းပုံစံနှင့် သင်တို့ခေတ်မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းပုံစံကွာခြားနေမှာကို စိုးရိမ်နေတာလား? သင့်ဆယ်ကျော်သက်လေးအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မိတ်ကပ်အထူကြီးလိမ်းထားသလိုဖြစ်မနေစေဘဲ နုပျိုလန်းဆန်းနေစေဖို့ ကူညီပေးချင်ပါတယ်။
မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းက မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အစက်အပြောက်တွေကို ဖျောက်ပေးပြီး သင့်ဆယ်ကျော်သက်လေးရဲ့ သဘာဝအလှကို မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် ကူညီပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၁။ မိတ်ကပ်မလိမ်းမီ ပထမဆုံးအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ပါ (skin care)
အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းက ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ပေးမှ မိတ်ကပ်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ကလေးရဲ့ အသားအရေက ထိရှလွယ်ဆဲ နုပျိုဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေကို ပျက်စီးလွယ်စေသော မိတ်ကပ်ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး သင့်ကလေးရဲ့ မျက်နှာကို သိမ်မွေ့သော(အရမ်းမပြင်းသော) မျက်နှာသစ်ဆေးဖြင့် မျက်နှာသစ်စေပါ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ချွေးပေါက်တွေကို ပြေပြစ်စေပြီး အသားအရေကို စိုပြေစေမယ့် Toner သုံးပါ။
– ဒီအအဆင့်မှာတော့ ရေဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် moisturizer ကောင်းကောင်းသုံးပြီး အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ပါပဲ။
၂။ မိတ်ကပ်က ပိုပါးလေ ပိုကောင်းလေ
ဆယ်ကျော်သက်မိတ်ကပ်နှင့် ပတ်သက်လာရင် အမြဲတမ်းအတတ်နိုင်ဆုံး ပါးပါးလေးဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော မိတ်ကပ်အကြံပြုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် သူမမှာ ဖုံးကွယ်စရာ အမာရွတ်တစ်ခုခု (သို့) အမှတ်တစ်ခုခုမရှိဘူးဆိုရင် ဖောင်ဒေးရှင်းမလိမ်းတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
concealer ကလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းလိမ်းခြယ်မှုက ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှုကို ထူထဲစေပြီး သဘာဝမကျဘဲ အတုအယောင်အသွင်အပြင်ကို အသားအရေပေါ် တင်ထားသလိုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ လုံးဝအသုံးမပြုရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ပေါ့ပါးပြီး အလွယ်တကူအရည်ပျော်မသွားစေတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းမျိုးကို ရွေးချယ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
၃။ မှန်ကန်သော အရောင်များကို ရွေးချယ်ခြင်း
ဒီအဆင့်အရမ်းအရေးကြီးပေမယ့် ပျိုမေတော်တော်များများ မကျွမ်းကျင်ကြတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေအနေနဲ့ သူတို့အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ မိတ်ကပ်အရောင်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပြီး သို့မှသာ မိတ်ကပ်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေပိုတိုးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ၊ concealer နှင့် tinted moisturizer တွေက အသားအရေအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်ဖက်သော အရောင်(အရိပ်)တွေ ရှိကြပါတယ်။ သင့်ဆယ်ကျော်သက်သမီးလေးရဲ့ အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အမျိုးအစားကို ရှာဖွေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မေးရိုးတစ်ဝိုက်ပုံဖောက်တဲ့အခါ concealer (သို့) tinted moisturizer ကို သမီးဖြစ်သူရဲ့ အရောင်ကို လိုက်ဖက်အောင် ရွေးချယ်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ လက်ခုံပေါ်မှာ စမ်းသပ်တာက မှန်ကန်တဲ့ရလဒ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အရောင်(အရိပ်) ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာမယ့်အသားအရေအပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ နေ့ခင်းဘက်မှာပဲ စျေးဝယ်ပါ။
၄။ နှုတ်ခမ်းနီ (သို့) နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးချိန် မျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲ့ အသွင်အပြင် (သို့) ဝတ်ဆင်မယ့်အဝတ်အစားအပေါ် မူတည်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီ (သို့) နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီတွေဟာ မိတ်ကပ်လိမ်းရာမှာ ပိုပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုလန်းဆန်းစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက အရောင်တောက်တောက်လေးနဲ့ သဘာဝဆန်ဆန်ဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီကြောင့် မျက်နှာအသွင်အပြင်က အရိုင်းဆန်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်က အရမ်းထင်းနေမယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကို လျှော့တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မျက်တောင်စတိုင်လ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အပြာရောင်မျက်လုံးနှင့် အစိမ်းရောင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်တွေအတွက် အညိုရောင် mascara အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး အနက်ရောင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကတော့ အနက်ရောင် mascara က အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မျက်တောင်အရင်းမှာ မျက်တောင်ကော့ဆေးကို အသုံးပြုပြီး အပေါ်ဘက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းကော့ပေးပါ။